Igwe eji egwu egwu DTH
Njirimara teknụzụ anọ nke ọkpọkọ ọkpọkọ waya
1, Drill mkpara ahu The akuakuzinwo anwụrụ ozu na-emepụta na G105 na S135 mmanụ ọkpọkọ conforming API ụkpụrụ. Site na ọgwụgwọ okpomọkụ n'ozuzu, enwere ike imeziwanye ihe eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ndụ ọrụ ahụ. Iji belata njikọ njikọ nke ọkpọkọ ọkpọ a ...
Isi ọrụ nke wireline ntụziaka ọkpọkọ
Ọkụ ọkpọ ntụ ntụ ntụ ntụ bụ akụkụ dị mkpa nke akụrụngwa mgbapu ụzọ. Ọ bụ akụkụ nke nwere mgbagwoju anya mgbagwoju anya na ọnọdụ ọrụ na-adịghị mma na usoro nhazi ntụziaka. Isi ọrụ ya gụnyere: 1) Nyefee nrụgide axial nke bit na-etinye n'oge mkpọpu na ...
Akụrụngwa nke wireline ọkpọkọ
site admin na 21-12-18
The wireline ọkpọkọ ọkpọkọ na-emi esịnede ndị na-esonụ ihe: Mpụta ọkpọkọ mpụta njikọ, akara mgbanaka, mpụta njikọ eri, n'ime isi nke nnyefe akara, n'ime njikọ nke nnyefe akara, mpụta njikọ nke nnyefe akara, nkwado mgbanaka, na-adịghị mma okporo osisi nke n'ime isi nke. trans...
Teknụzụ Ngwuputa Ngwuputa ntụzịaka bit diamond directional
Ngwupu ala bụ ụzọ mgbapu mmiri nke na-eji iwu na-ehulata ebumpụta ụwa nke ọdọ mmiri ma ọ bụ na-eji ngwa ihe na-eme ka mmadụ gbatịa olulu mmiri ntụzịaka ruo n'ebumnobi a kara aka dịka ihe a chọrọ. Enwere ike ịkọwa ya dị ka teknụzụ na sayensị nke igwu mmiri ...
Ọmụma nlekọta nke ọkpọkọ ọkpọkọ triangular
Ekwesịrị idobe ọkpọkọ ọkpọ triangular mgbe niile, ọkachasị n'oge oyi. Yikuang Xiaobian ga-akọwa ojiji na mmezi nke ọkpọkọ ọkpọkọ triangular n'oge oyi. 1. A ga-edobe ọkpọkọ ọkpọ triangular mgbe niile, ọkachasị n'oge oyi. A ga-ekpebi usoro mmezi acc...
Ị ghọtara mkpa ọ dị ịkpachara anya maka iji ọkpọkọ egwu egwu?
Ngwunye ọkpọkọ bụ ọkpọkọ ígwè nke nwere oghere na ọdụ, nke a na-eji jikọọ ngwá ọrụ elu nke igwe na-egwupụta ihe na ihe ndị na-egwupụta ihe na-egweri ma ọ bụ ngwaọrụ oghere dị n'okpuru ala. Ebumnuche nke ọkpọkọ ọkpọkọ bụ ibufe apịtị na-egwupụta ihe na ntakịrị ma bulie ...
Ngwa nke ogologo Cardan spiral drill pipe
Ngwaahịa ọ bụla kwesịrị ịrụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Spiral drill pipe bụ ụdị akụrụngwa enwere ike iji na injinia geological na injinịa ihe owuwu ndị ọzọ. N'ime usoro nke iji ngwá ọrụ ahụ, anyị kwesịrị ịma ihe ndị a na-akpachapụ anya maka iji ọkpọkọ ọkpọ. 1. Igwe na-egwupụta ihe ga-abụ ...
Iji na kpachara anya nke gburugburu akuakuzinwo anwụrụ - Yikuang
Uru ngwa nke nnukwu oghere ọkpọkọ
Site na iji nwayọọ nwayọọ na-ebelata ihe ndị dị n'elu na nke a na-emekarị, ụlọ ọrụ na-egwupụta ọkpọkọ Datong ga-atụgharị na mpaghara mgbagwoju anya, oke osimiri na ebe miri emi iji chọọ ihe onwunwe. N'ihi ya, ihe ndị a chọrọ maka igwu mmiri na-adị elu ma dị elu. A na-eji eriri MWD eme ihe na geology na ngwuputa indu ...
Ojiji na kpachara anya nke ọma nke auger drill bit
Otu esi eme mmezi nke diamond bit kwa ụbọchị
Diamond bit dabara adaba maka ngwuputa coal, nyocha ala ala na mgbapu injinịa dị iche iche, mana nsogbu nke ndị ọrụ nka dị iche iche bụ ka esi arụ ọrụ kwa ụbọchị. N'ihi na diamond kọmpat bit, taa, anyị kwesịrị ịkọwa otu esi eme kwa ụbọchị na-arụ ọrụ nke diamond bit dị ka chọrọ ...
Teknụzụ mgbapụta agbaji
site admin na 21-10-05
1, Research ọnọdụ nke fracturing mgbapụta technology na China n'ihi na China aku na uba ka lags n'azụ ndị ọdịda anyanwụ mba mepere emepe, ọ bụ n'ozuzu ka na ogbo na larịị nke iṅomi na mma na ndabere nke yiri mba ọzọ ngwaahịa. N'otu aka ahụ, teknụzụ na-agbaji bụ ...
N'ihi na jụrụ ajụjụ banyere anyị ngwaahịa ma ọ bụ pricelist,biko na-ahapụ ka anyị na anyị ga-akpọtụrụ n'ime 24 awa.
adreesị:Obodo Chenfen, ụlọ ọrụ Sub-District Xinhua, Liaocheng, Shandong, China